Associations (အသင်း) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
Myanmar Computer Federation - MCF Featured
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း807
MCPA Online is the official website of Myanmar Computer Professionals Association - the largest association of ICT professionals in Myanmar.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း949
MM-CERT (Myanmar Computer Emergency Resp... Featured
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း988
Myanmar Information Security Association
Room 6, Building 7, MICT PARK
01 652 321
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း5
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း15
Myanmar Digital Rights Forum (MDRF)
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း18
Free Open Source Society
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း208
Ubuntu Myanmar team
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း370
We’re in Myanmar, designing the incubator program for Ideabox. It will be an amazing way to build your startup or partner to bring your existing business into South East Asia’s next growth market. If you can’t wait to start, here’s some insights about Yangon today. We’ll keep this updated. You can expect it to grow quickly.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း289
MYANMAR'S FIRSTCOMMUNITY TECHHUB EVER
SuleTech's mission is to foster the development of the tech ecosystem in Myanmar. Overlooking Sule Pagoda from the 11th floor of MAC tower, the space will house Code for Change Myanmar's Innovation Lab Phandeeyar; Ideabox, an incubator for technology companies and the community powered by Ooredoo Myanmar; andacommunity co-working space for budding entrepreneurs and events to foster the tech community.
34, Ma Po Street, 11111, Yangon
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း418
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း378
လုံခြုံရေး-သေတ္တာ (Security inaBox)
လုံခြုံရေး-သေတ္တာ ကွန်ရက်စာမျက်နှာဟာ Technology Collective နဲ့ Front Line တို့ရဲ့ ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ချက် တခု ဖြစ်တယ်။ ဒီကွန်ရက် စာမျက်နှာကို အားပေးထောက်ခံသူတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူတွေရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် လုံခြုံရေးအပြင်၊ တခြား လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် စီစဉ်ထားတယ်။ လုံခြုံရေး-သေတ္တာထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ ဒီဂျစ်တယ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို တင်ပြတဲ့ သုံးစွဲနည်း စာအုပ်ငယ် တခု ပါရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လက်ကမ်း လမ်းညွှန် စုစည်းချက် တခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားတယ်။ သီးခြား အခမဲ့ ဆော့ဗ်ဝဲ (သို့) ပွင့်လင်းတဲ့ အရင်းအမြစ် ဆော့ဗ်ဝဲ တခုစီ ပါရှိတဲ့အပြင်၊ ကွန်ပျူတာကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းနည်း၊ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်နည်း၊ (သို့) အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး privacy ကို ထိန်းသိမ်းနည်း စတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ပါဝင်တယ်။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း298
Digital Survival (ဒစ်ဂျစ်တယ် ကြံ့ခိုင်ရှ...
လက်ကိုင်ဖုန်းများက ဒေတာ အများအပြားကို သယ်ဆောင်ပေးတယ်။ သင့်ရဲ့ အဆက်အသွယ်များ သာမက ခေါ်ဆိုချက်များနဲ့ လက်ခံမှု မှတ်တမ်းများ၊ သတင်းတိုများကို ပေးပို့ပြီး လက်ခံချက်များလည်း ပါဝင်တယ်။ ၄င်းတို့က သင့်အကြောင်းကို အများကြီး ဖော်ပြနိုင်တယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် သင့်ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း အဆက်အသွယ်များ အားလုံးပါတဲ့ စာရင်းက သင်နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူများအကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း332
Myanmar ICT for Development Organization...
No. (199), Room No. (6), 1st floor,
Bo Myat Tun Street (Middle Blk),
Office Phone : 951 294669
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း545